शिक्षकलाई कानुन लाग्दैन ? | Edupatra
जेष्ठ २६, २०७९ मानबहादुर विश्वकर्मा
वर्ग सिर्जना गर्ने शिक्षा छ । सरकारी विद्यालय सरकारबाट समुचित रुपमा परिचालन हुन सकेका छैनन् । विद्यालयमा पुस्तक पुग्न सकेका छैनन् । ५० लाख पुस्तक छाप्त सकेको छैन । यो सरकारको लापरबाही हो । यो अहिलेको मात्र होइन विगत दशकैं देखिको हो ।
सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले आधा वर्षसम्म पाठ्यपुस्तक नै पाउँदैन् । सरकारी र निजीमा पढ्ने विदार्थीको रहन सहन चाल चलन र सिलस्वाभावमा नै आकास जमिनको अन्तर छ । समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन जनक शिक्षाको क्षमता विकास गर्नुपर्छ अन्यथा निजीलाई पुस्तक छाप्न दिनु पर्छ ।
जातीय आधारमा पनि शिक्षामा विभेद छ । सहरमा विभेद नदेखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि जातीय विभेद छ । आज मात्र दलित भएका कारण ललितपुरमा ४ जना विद्यार्थी शिक्षा लिनबाट बञ्चित भए भन्ने सुन्नमा आएको छ । म शिक्षकलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु शिक्षकलाई देशको कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ? शिक्षक, पुरोहित, प्रहरीलाई आचार संहिंता किन लाग नहुने ?
(प्रतिनिधि सभाको विनियोजन विधेयक,२०७९ माथिको छलफलमा सम्बोधनका क्रममा सरकारी र आवासीय विद्यालय भन्ने वाक्य बारम्बार दोर्होयाएका थिए )